Shiinaha caruurta PU warshad Raincoat iyo soosaarayaasha | Senlai
Gawaarida Gawaarida Ilmaha
Bannaanka Dibadda ee Carruurta
Carruurta PU Raincoat
1. Mid ka mid ah wax soo saarkeena waa PU raincoat, inta badan loo dhoofiyo wadamada Nordic, Oceania iyo gobolada kale. Koodhadhka roobka ee carruurta ayaa loo qaybiyaa suudhadh iyo suudhadh isku mid ah. Waxaa jira kuwo dhumuc leh iyo kuwo dhuuban.
Astaamaha dharka dhogorta sidoo kale waa mid aad u muhiim ah.Kadib taxane ah oo farsameyn ah, cufnaanta ayaa ah mid aad u cad, dabacsanaan wanaagsan, ma fududa in la sameeyo kiniin, timo lumis iyo wixii la mid ah. Guud ahaan daaweynta gaarka ah, dhogorta ayaa leh anti Maqaarka dhogorta leh ayaa lagu qasi karaa maro kasta, waxqabadkaani wuxuu si weyn u hagaajin karaa kuleylka iyo shaqooyinka kale. Dharka dhogorta ruxdu wuxuu dareemayaa inuu aad u jilicsan yahay. Intaa waxaa dheer, waxay samayn kartaa qaabab kala duwan iyadoo loo eegayo baahiyaha kala duwan ee shakhsiyaadka.
3. Midabku wuxuu noqon karaa mid hodan ah oo midab leh, waana mid dabiici ah oo siman. Nooca khafiifka ah waxaa laga sameeyay PU iyo dharka salka. Dharka aasaasiga ah waxaa laga samayn karaa dharka alaab-qeybiyaha ee uu cayimay macmiilku.
4.Waxaa jira laba nooc oo suudh ah, mid waa jaakad iyo ganaaxyaal, kan kalena waa jaakad iyo surwaal dhexda.Baraska surwaalku waa inuu u adeegsadaa sida xargaha xargaha ay u lahaan doonaan xargaha xargaha xargaha ee jirka garbaha, Iyo surwaalka sagxadda fidsan iyadoo la adeegsanayo booska dhexda ee xididka caagga ah ee laastikada ah, isku laastik ah.
5. Wadada xirashada jubbadda ee afka lugta ayaa inta badan isticmaasha jiinyeer midab ah, oo dhammaantood ka samaysan kara waxyaabo aan biyuhu xirin si loo hubiyo in dharka uu shaqeynayo xilli roobaadka iyo xilliga qoyan.
6. Faa'iidooyinka dharka PU waa: inta badan laga sameeyay iskudhaf fiber laastik sare, oo leh maqaar astaamo la mid ah; Isla mar ahaantaana, miisaanka khafiifka ah, adkaanta adag, neefsashada, biyuhu, ma fududa in la ballaariyo iyo ilaalinta deegaanka, guryaha jireed oo wanaagsan, iska caabin qallooca iyo leexashada, jilicsanaanta, xoogga silica, oo leh hawo qaadashada.
Hore: Bacda Hurdada
Xiga: Carruurta Skisuit
Koodhadhka Caruurta Cad
Koodhadhka Caruurta Dheer
Koodhadhka Dugsiga Carruurta
Fakis: 0086-311 85983948
Xaaladaha faafa, shirkadda ...